दलान नेपाल : सुशील कोईरालाको मधेश चुनौती
सुशील कोईरालाको मधेश चुनौती
नेपालको ३७ औ प्रधानमन्त्रीको रुपमा सोमवार नेपाली काग्रेसका सभापति सुशिल कोईराला निर्वाचित भएका छन । राजनिती रुपमा स्वच्छ छवि भएका कोईराला दोस्रो संविधानसभामा कागे्रस पहिलो पार्टीको रुपमा शक्ति पाए पछि प्रधानमन्त्री भएको हो । उनलाई हाल एमाले लगायतका दलहरुले समर्थन गरेका छन भने माओवादी र मधेशवादी दलहरु लगायत केहीले समर्थन गरेका छैन । मधेशी पार्टीहरुको तर्फवाट विजय गच्छदार, शरदसिंह भण्डारी र महेन्द्र यादव उनलाई समर्थन गर्न खुटा नै उचालेका थिए तर अन्तिम समयमा उनीहरु पछि हटे । महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो शुरु देखि नै यो खेल वाहिर बसेका थिए ।
गच्छदार, भण्डारी र महेन्द्र यादवको इच्छा हुदा हुदै पनि सरकारमा सामेल नहुने अवस्था सिर्जना हुनु र महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो एकिकृत पार्टी बनाएर आन्द्योलनमा जाने बताईरहेका बेला नयां प्रधानमन्त्री कोईराला मधेशलाई कसरी लिने त्यसमा नै उनको सफलता र असफलता निर्भर हुन सक्छ ।
हालै सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा काग्रेसले सबै भन्द्या वढी मत मधेशवाटै ल्याएका थिए र त्यसलाई उचित सम्मान दिनु नै कोईरालाको लागी सबै भन्दा ठुलो चुनौती हुने आकंलन गर्न थालिएको छ ।
हालै निर्वाचनको क्रममा मधेशका जिल्लाहरुमा कागं्रेसीहरुले संघीयता संहितको संविधान र स्थानिय निकायको निर्वाचन मार्फत विकासको ठोस वाटो पहल्याउन आफुहरुलाई मत दिन आब्हान गरेका थिए । विगत ५ बर्षमा माओवादी र मधेशी नेताहरुको क्रियाकलापवाट असन्तुष्ट रहेका मधेशीहरु त्यही आक्रोशमा आफनो पुरानो पार्टी काग्रेसलाइ पत्याए । तर के यो काग्रेस नेतृत्व सरकार मधेशको उक्त मनोभावनालाई सम्बोधन गर्न तर्फ अघि वढला, त्यो नै प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाको मुख्य चुनौती हुनेछ ।
नयां प्रधानमन्त्री कोईरालाको हरेक क्रियाकलापमा मधेश र मधेशीको मनोविज्ञान झल्कनु पर्छ । किनकी उनी स्वयंक मधेश आन्दोलनको एउटा केन्द्र रहेको बाके जिल्लाका मधेशी नागरिकहरुको मतवाट आजको स्थानमा पुगेको छ ।
यो कोईराला र कागे्रसका लागी मौका पनि हो । हिजोका दिनमा माओवादी र मधेशी पार्टी सम्मलीत सरकारले पास गराउन नसकेका समावेशी विद्ययेक कोईराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएर आम मधेशीको मन जित्न सक्छ । त्यसैगरी संविधान निर्माणको क्रममा हाल कमजोर देखिएका मधेशी पार्टीको विश्वासमा संघीयता ठोस रुपमा लागु गरेर कोईराला ईतिहास पुरुष बन्न सक्छ ? तर, यदी कोईराला उक्त कुराहरु पछि पर्दै सरकारमा विगतकै परिदृश्यहरुमै रमाउन थाले उनी अरु भन्दा चाडै असफलको श्रेणीमा पनि पुग्न सक्छ । किनकी निर्वाचन मार्फत हाल कमजोर देखिएका मधेशी पार्टीहरु हाथमा दही जमाएर त पक्कै बस्दैन्न होला ?
हाल कागे्रसको एजेन्डामा मधेशी पार्टीहरु वाहेक अरु सबै लगभग एक नै देखिन्छन । त्यसैलै कोईरालाले अहिले देखि नै मधेशमा प्राथमिकतामा राखेर विश्वास जित्न सकेन भने उनको असफलताको मुख्य कारक मधेश नै देखिन सक्छ । जुन स्वयंम कोईराला देखि सिंगो काग्रेस पार्टीका लागी हानिकारक सावित हुनेछ ।
Unknown November 28, 2014 at 3:27 PM